Windows Application | PRO-X Software Solution
Employee Management System (Version 1.0)#EMS&nbsp;ဆိုသည်မှာ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အသုံးပြုသော ဆော့ဝဲလ် ဖြစ်ပါသည်။Employee Management System (Version 1.0) တွင် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။🔹&nbsp;Company ProfileBusiness (or) Company ၏ အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်း၊ ပြင်ဆင် နိုင်...
Visits : 4265
အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း များအတွက် အဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးဆွဲထားသော ဆော့ဝဲလ် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်း၏ နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်မှုများကို များစွာ အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည့်အပြင်၊ လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ချက်ခြင်း ထုတ်ကြည့် နိုင်သောကြောင့် အချိန်ကုန် သက်သာစေမည် ဖြစ်သည်။Setup Module- Company Profileလုပ်ငန်း နှင့်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်...
Visits : 5191
Money Changer System
What isaCurrency Exchange?A currency exchange isabusiness or financial institution that has the legal right to exchange one currency for another currency to its customers. A currency exchange may beastand-alone business or may be part of the services offered byabank or other financial institution. The currency exchange profits from its serv...
Visits : 6604
Pro-X SMS messaging isalegacy description for application-to-person SMS messaging services. It refers specifically to the sending of large number of SMS messages to the mobile phones ofapredetermined group of recipients. Benefit is save your time.Modem ConnectAuto Contact AddAuto SMSMessage ScheduleAuto Message ReplyMessage BlacklistMessage Tem...
Visits : 5959
Studement Management System
Students Management System အတွက် Server &amp; Clients ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Offline အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။Software တွင် အဓိက ပါဝင်သည့် Features တွေကတော့Student RegistrationStudent History ကို Remark လုပ်ထားလို့ရပါသည်။ (သင်တန်းပျက်တာ၊ စာမပြီးတာ etc.)Course တွေ ခွဲလို့ရမယ် (သင်တန်းကြေး၊ ကာလ စတာတွေပါ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်)Class တွေ ခွဲထားလို့ ရမယ်...
Visits : 5897
POS stands for point of sale. A point-of-sale (POS) transaction is what takes place betweenamerchant andacustomer whenaproduct or service is purchased, commonly usingapoint of sale system to complete the transaction.&nbsp;POS systems provide companies with sales and marketing data.Customer ManagementProduct ManagementCategory ManagementUnit...
Visits : 7505